Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray xarumaha Booliska Gaalkacyo “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray xarumaha Booliska Gaalkacyo “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Galmudug C/kariin xuseen Guuleed ayaa maanta kormeer howleed ku tegay xarunta taliska qeybta booliska Gobalka Mudug ee Dagmada Galkacyo, kaasi oo ugu kuur galayay xaaladda ciidamada booliiska ay ku shaqeeyaan.
Mudane Cabdikarin Guuleed ayaa intii uu ku sugnaa halkaasi uu warbixino ku aadan xaalada ciidanka booliska Galmudug ka dhageeystay saraakiisha ciidamada booliiska Galmudug
Taliye ku-xigeenka Ciidanka booliiska Galmudug Korneeyl Cabdi Jaamac Cabdule (Xabeeb) ayaa sheegay in ay jiraan baahiyo fara badan oo heysta ciidanka booliiska Galmudug, waxaana uu ka codsaday Madaxweynaha Galmudug in la tayeeyo ciidanka booliska oo ay helaan tababbaro fara badan.
Madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isna dhankiisa sheegay in ay xoogga saari doonaan wax ka qabashada baahiyada ciidanka booliska Galmudug, isagoo dhanka kalana kula dar daarmay ciidanka booliska Galmudug, gaar ahaan kuwa degmada Gaalkacyo ineey sii laba laabaan shaqada ay bulshada u hayaan.
“Ugu horeeyn waxaan idinkugu hambalyeeynayaa howsha aad heysaan sida aad u gudaneeysaan hadaad tihiin ciidanka booliiska ee Dagmada Galkacyo taasoo ah mid muuqata ayna ugu danbeeysay talaabadii ciidankabooliiska Galkacyo uu shalay kusoo qabtay gacan ku dhiigle dilay marxuum Soomaaliyeed oo haatan xiran, tan kale dalku wuxuu ku jiraa xaalad soo kabashaa, waana mid jirta baahiyada aad sheegteen, waxaanse ku dadaali doonnaa in aan wax ka qabano anagoo la kaashaneeyna Dowladda Federaalka iyo hay’addaha taakuuleeya ciidanka Booliiska” ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Sawir Qaade C/risaaq Maxamed Axmed Galkacyo.
Xuska Maalinta biyaha oo lagu qabtay Caabudwaaq
Ra’iisul Wasaare Cumar iyo Wafdi uu Hoggaaminayo oo si diiran loogu soo dhaweeyay Beledwayne “SAWIRRO”